AMAPHOSELELI AKHO OWATHANDAYO FUTHI AHAMBA NGE-CAMPER - THE INDIAN FACE
Sisanda kukutshela nge- i-camper van revolution, enye yamathrendi wakamuva uma kuziwa ekuhambeni. Akungabazeki ukuthi kuwukubonakaliswa komoya wethu wokuzidela, okukhulu kakhulu Indian, futhi siyathanda ukwazi ukuthi, njengathi, abantu abanjengawe bafuna ukuphuma endaweni yabo yokuhlala banikeze lokho okwaziwa ngokuthi #VanLife. Kuleyo ndatshana sikutshele ukuthi le nhlangano ivelaphi, yiziphi izinhlobo zamaveni ekhempini akhona, izici ezinhle zesipiliyoni kanye nokuqhuma ekuqashweni kwalezi zimoto. Ngakho-ke, uma uyigejile, gijimani ukuyifunda ngoba iyasebenza futhi iyathandeka. IZwi le Indian!
Manje, uma le ndlela ehlukile ithambekele kakhulu kunakuqala, ayibangelwa nje kuphela ubhadane kanye nezinyathelo zokukhawulelwa ngemuva koCovid esikhawulelwe ngazo lapho sihamba; kodwa futhi ngenxa yabathonya. Eqinisweni, kokuthunyelwe kuwebhusayithi yethu esikushoyo, sithole enye yezinkampani ezihamba phambili ekuqashweni kwalolu hlobo lwamaveni eSpain okuthiwa Uphaphe UVan. Wazalelwa ngaphakathi kwendawo yedijithali, ufuna ukukhipha uhlangothi lomhloli wamazwe kakhulu futhi siyakuthanda lokho. Osomabhizinisi besifazane abaphethe le phrojekthi enhle bangaba nomthelela ku-Alba Paul Ferrer nomngani wakhe uLucía, futhi uhlelo lwabo lokuxhumana luyazikhulumela: bayakwazi abakwenzayo.
Futhi ukuthi le nkampani yokuqasha i-camper, kanye nabanye abaningi, bakwazile ukuheha abanye abagqugquzeli abakhulu ngaphakathi kwepanorama yamanje, kungaba, ngokuqinisekile, ukuqasha, noma ukuthenga eyodwa. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini? Sizokutshela!
Abathonya abaye baphila isipiliyoni CAMPER
1. IGOTZON MANTULIZ (@mzokoloko)
Le modeli yaseSpain, umklami nomenzi wokuzijabulisa, owaziwa nangokuthi enye yezinja ezingenakuqhathaniswa emhlabeni, uqale waba nodumo ngokuwina uhlelo lwesihlanu lwe-EITB (El Conquistador del Fin del Mundo), umbukiso ongokoqobo kwinethiwekhi yesifunda saseBasque . Its umoya wasendle onamandla kakhulu kukuthatha ukuthi wazi amakhona amahle kakhulu, eSpain nakwamanye amazwe, ngaphakathi kwenkampu yakhe. Futhi, kuhle Umthandi wezemidlalo, uyakujabulela ukuntweza olwandle neminye imisebenzi yamanzi, futhi ezithombeni zakhe eziningi kwesinye isikhathi sithola ibhodi lakhe ne-wetsuit yakhe, zilungele okulandelayo i-aventura.
2.DANIEL ILLESCAS (@danielillescas)
UDaniel Illescas unabalandeli abayisigidi ku-akhawunti yakhe ye-Instagram futhi okuqukethwe kwayo kuheha noma ngubani othanda kakhulu i- izithombe ezisezingeni eliphakeme futhi i izindawo ezibukeka kahle kakhulu. Futhi, ngaphezu kokuba yisimodeli, i-youtuber kanye noxhumano lochwepheshe, uyabona ukuthi unalo moya wokufuna ngaphakathi kuye okuholele ekutheni athathe indawo yokuhambahamba ukuchitha iholide elihlukile. Ujabulele izinsuku ezimbalwa emgwaqeni nomlingani wakhe wamanje futhi bathatha uhambo ngezindawo ezicishe zifihlwe, okwenza kukhetheke kakhulu. Ngiqonde ukuthi, ngokubona lokhu, ngubani ongafuni ukukwenza futhi?
3.USUSANA MOLINA (@sana_busi)
USusana Molina, odume ngelikaSusana "Bicho" ngegama lakhe lomsebenzisi ku-Instagram, ungene esikhaleni sabezindaba ngenxa yombukiso wangempela Ubhuti Omkhulu. Kamuva sazombona engena Isiqhingi sezilingo njengenye yezintandokazi ezinkulu. Kodwa-ke, kude nodumo lwakhe olusesikrinini, sithole ukuthi umgqugquzeli naye une- ohlangothini olusha kakhulu. Ubheja ekwenzeni i- umzila enkambini bese usebenzisa ezinye izinsuku ezahlukene lapho, njengoba kubonakala ekulandiseni kwakhe, wajabulela kakhulu.
4.HUGO PÉREZ (@hugoperezzabaleiro)
NjengoSusana Molina, uHugo Pérez naye waqala umsebenzi wakhe wezokuxhumana ohlelweni lwe Ubhuti Omkhulu futhi ibiyingxenye yolunye lwezinhlelo ze- Isiqhingi sezilingo. Kwiphrofayili yakhe ukhombisa abalandeli bakhe kakhulu sibindi futhi sporty, wenza imigwaqo yokuhamba izintaba, i-snorkeling, ukuhamba ngebhayisikili, ukugwedla nge-paddle, ukugibela i-jet skis ... futhi-ke ukuhamba ngekamu. Nsuku zonke uyasimangaza ngezindawo ezintsha nezithombe ze imvelo ikhwalithi. Uphinde abe ngumthandi wezilwane futhi uhlala ezama ukuphelezelwa ezenzakalweni zakhe.
U-Angela akaziwa ngegama lakhe, kodwa ngegama lakhe le-inthanethi: Madame de Rosa. Konke lokhu kwaqala ngesikhathi evula ibhulogi lakhe lezemfashini nelokuphila ngo-2011, futhi kusukela lapho useke wavela ezinhlelweni ezimbalwa zethelevishini, kanye nasemuva kwesitayela njengomuntu obhala izitayela. Umhlengikazi ngomsebenzi, ukukhula kwakhe okukhulu ngokungangabazeki kube kuphrofayili yakhe ye-Instagram, futhi siyathanda ukubona ukuthi abantu abanjengaye nabo bayinikeza kanjani le nto i-camper adventure. Ekupheleni kosuku, angaba yisibonelo esicacile sempilo enesimiso esimatasa njalo, esimdingayo izikhathi zokunqanyulwa. Iyiphi indlela engcono yokwenza ngaphandle kohambo lomgwaqo usuka edolobheni?
6. UJONAN WIERGO (@jonanwiergo)
Umenzi wokuzijabulisa kusukela esemncane kakhulu, uJonan Beltrán Wiergo waduma wabonga ngohlelo lwePekín Express ngo-2016. Kusukela lapho, umValencian ubesazi ukuthi angabukhombisa kanjani ubuso bakhe obunesibindi kakhulu kuphrojekthi ngayinye ayenzile. Uthanda ukuhamba futhi i-akhawunti yakho ingaba ibalazwe lomhlaba ngenguqulo yezithombe. Kube nezikhathi eziningana uJonan anazo ukubheja emizileni ye-camper, futhi empeleni bekungobunye bobuso be-raffle obenziwe yindawo yokudlela yaseVoltereta (esizokutshela kancane ngezansi).
7. I-AIDA DOMENECH (@dulceida)
Kungashiwo ukuthi indlela ka-Aida Domenech, eyaziwa ngokuthi iDulceida, ifana kakhulu naleyo kaMadame de Rosa oshiwo ngenhla. Uvule ibhulogi ngo-2009 ngaphansi kwegama aziwa ngalo namuhla, ekhombisa ukuthanda kwakhe imfashini, isitayela nendlela yokuphila esesikhathini nemikhuba yakamuva. Ukuvela kwe-Instagram kumenze wagxumela empilweni yomphakathi ngesivinini esisheshayo, futhi ubambe iqhaza kweminye imibukiso yethelevishini. Ubelokhu engumuntu onethonya njalo unentshisekelo yokuhamba nangomoya wokuhweba. Ubuye wakhetha ukwenza imizila evenini ekhempini, kungaba sehlobo noma ebusika.
UKUDWALWA KEKAMERE ELABA NGOKWENZEKA
Impela ukhumbula enye yezinhlinzeko ze-Instagram ezinikezwa ngegciwane kakhulu zango-2020 lapho owinile anikezwa khona i-campervan. "Icala" lokuthi amakhulu ezinkulungwane zabantu baseSpain babelane ngalolu shicilelo ezindabeni zabo kwakuyinkambo yokudlela edumile yaseValencian ebizwa ngeVoltereta (esizamile sayithanda, kodwa lokho kungenye inkinga). Isenzo sokukhangisa sasebenza njengesisekelo sokumemezela ukuvulwa kwesakhiwo saso sesithathu enhlokodolobha yaseValencian, futhi ngaphandle kokungabaza yonke iValencia (nezwe lonke) zananela lezi zindaba. Ividiyo yalesi sikhangiso ifinyelele kumazwana ayisigidi. Isigidi! Wonke umuntu wayefuna i- van ukuthi iqembu lokudlela likuqinisekisile ukuthi laklama futhi lafaka ikampu endaweni ye- egcizelele ngokugcwele futhi, kunjalo, ifakwe kahle kakhulu. “(…) Ngakho konke okudingayo ukuhambahamba emhlabeni. Njengoba kuzwakala nje: umbhede / usofa, ikhishi, ishawa, itafula, umhlobiso… size sizisole ngokuthi sikunikeze ngemuva kokukwenza ngomdlandla ongaka (…) ”, kusho amazwibela ale ncwadi. Ukukhethwa komkhiqizo we-raffle, i-camper van, kukhuluma kabanzi mayelana nomoya wendawo yokudlela. Eqinisweni, ngisho nomphakathi wethu uzizwa ukhonjwe neqembu labanikazi bamahhotela elibinzana lalo eliphethe ifulegi lalo Uyemukelwa ohambweni. Ngiqonde ukuthi, impilo ibizoba njani ukube besingakuthathi njengenjabulo? Kungaba yini uma sizikhawulela kulokho esikwaziyo, uma singazifaki engozini?
Isiphetho sokuthi izindatshana eziningi zikhombe ukukhuluma ngalesi senzo sokumaketha futhi nathi esivumelana ngaso, ukuthi umphakathi waseSpain ufuna ukwenza ushintsho oluncane. Indlela yokuphila esesiyazi kuze kube manje yomele okwengeziwe. Uhambo e-camper lungase lungashintshi impilo yakho, kepha akukushiyi ungenandaba. Okuhlangenwe nakho kokuphila ngenkululeko, emgwaqeni, ukuxhumana ngokuphelele nemvelo, ukuhamba nalokho okulungile futhi okudingekayo (ngaphandle kokukhohlwa thatha eyodwa yamakepisi ethu ukuzivikela eLangeni) bese wabelana nesikhathi esezingeni elifanele nalabo bantu abenza umqondo wakho konke ... yilokho okubaluleke kakhulu.
Manje, ngubani owine ikhempu? Igama lakhe nguMarta Carceller futhi, njengoba sesiqoqene ezihlokweni ezahlukene ebezikhuluma ngalezi zindaba, ushiye imibono engama-28 isiyonke ngalolu shicilelo. Kwakunabasebenzisi abeza ukuzobeka cishe i-100 cishe, ngakho-ke, ngaphandle kokukholelwa ukuthi uzowina i-raffle, akazange angene bukhoma ababekwenza bevela kwi-akhawunti ye-Instagram yendawo yokudlela ababememezele kuyo ukuthi unqobile. Kwakungabangani bakhe okwakumele bamtshele ukuthi angene. Hamba uyobala! Empeleni, kuyaqondakala. Ngisho, sihlala sithambekele ekucabangeni ukuthi "ama-Instagram giveaways awalokothi athinte" kepha ... uyayikhumbula le esiyenzile? Impela! Singabokuqala uku sifuna ukukukhapha kuloluhambo, yini impilo. Vusa lowomoya wokuzijabulisa esazi ukuthi uwuthwele ngaphakathi.
UBANI ONGAKUSIZA NGE #VANLIFE?
Yebo, into yokuqala esincomayo ukuthi ufunde i-athikili yethu yangaphambilini ebikhuluma, ngokunembile, ngalokhu amaveni ekamu. Manje, ingabe ufuna ukuzama isipiliyoni se-camper futhi awazi ukuthi uqalephi? Ake siqale ukusebenza! Sikutshele ngabathonya abahlukahlukene abathandile, kepha iqiniso ukuthi kunamanye ama-akhawunti amaningi angakusiza ngalo msebenzi wokuzijabulisa. Baze bakwenze kubukeke kulula! Bangamaphrofayili anolwazi olukhethekile lokutshela ezinkundleni zokuxhumana konke ongakwazi mayelana nalesi sihloko, futhi bonke basivumela ukuba singene ngaphakathi ezindlini zabo ngamasondo. Ngalokho kuphela, isinambuzane sisiluma sonke. Kuzoba kanjani ngempela phila i- # VanLife ngokugcwele?
Kubizwa ubuhlalu bokuqala esibubonile @thembeky. Ngemuva kwakhe uRaquel noJesús, umbhangqwana waseMadrilenian obelokhu "kusukela ngo-2015 ethola impilo ngeveni", njengoba kushiwo kwi-Instagram biography yakhe. Okuqukethwe yikho konke ofuna ukukubona uma usendleleni eya emsebenzini uzibuza ukuthi impelasonto elandelayo izokuba nini lapho ungabalekela khona edolobheni. Ulwandle, izintaba, ukushona kwelanga, ukudla kwasekuseni okunemibono, ukuntweza olwandle olude ... ngubani ongafuni ukuphila impilo enjalo? Okungenani singakuthola ngekhamera yakhe.
Sithole enye i-akhawunti incanyana kodwa ngekhwalithi yokuqukethwe okusithinte ngokuphelele. Ubizwa ngegama @mzokoloko Futhi, njengoba kungenzeka usuvele utholile, umlingiswa ophambili nguVolkswagen Multivan wakhe obizwa ngoGreta. Abanikazi bayo, u-Ana noMarco, badlula ezindaweni ezingapheli futhi babelane nabalandeli babo, futhi yize le moto ineminyaka engama-30 ubudala, bayayinakekela sengathi ngomunye womndeni futhi iyakhombisa. Siyathanda!
I-akhawunti yokugcina esifuna ukukubonisa yona ibizwa @mzokoloko futhi umnikazi wayo unothando lwangempela lwamaveni. Uhlala "endleleni", njengoba kukhonjisiwe ezindabeni zakhe lapho efika ezindaweni ezintsha ethintana ngokuphelele nemvelo. Siwuthanda kakhulu umoya wakho wokuhweba. Yini enye yamaNdiya ukwedlula isibindi? Wenza uhlelo oluyidokhumentari olubizwa nge- “This is #VanLife”, ngaphezu kokusungula inkampani yama-camperizations, homologations nokulungiswa kwamaveni abizwa ngeWoodvans ngezandla.